I-ode kwindalo ngokusebenzisa iifoto zikaLeMay | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Igcisa lidibanisa amakhulu ezithombe ukwenza irhafu kwindalo
Iikholaji zikaYsbel LeMay ziyaqamba umfanekiso ogqwesileyo wobukumkani bakho into. Yenza ezo kholaji zisebenzisa iifoto ezikhulu ukudibanisa kwisiphelo esinye.
Igcisa lokuzalwa laseCanada liyamakha imifanekiso iqhekeza ude ufumane ukuba wonwabile ngesiphumo sokudityaniswa kwakho. Isiphumo sokwakhiwa kwehipnotic oluka iziqwenga zezityalo, izilwanyana kunye nezinto kuseto lweepanorama zobungangamsha bendalo.
Umntu unokuthi iingoma zakhe zi ode kwindalo ukusisa phambi kwento engaqondakaliyo kwaye egxile nzulu kwimo yemvelo nakwilizwe elisingqongileyo.
U-LeMay wazalwa kwaye wadalwa eQuebec, Canada. Wagxila kwikhondo lakhe lomsebenzi kwintengiso yehlabathi kangangeminyaka eli-15, apho yena Wakhulisa iitalente zakhe kwimbonakaloUyilo lwegraphic kunye nolwalathiso lobugcisa. Engonelisekanga yindlela yakhe yokuphila, wagxila kwilizwe elinokwanelisa nelinomvuzo njengobugcisa kunye nokufota.
I-LeyMay ngoku ine eyona nto iphambili ebomini bakho yeka neekholeji zakho. Imvelaphi kula maqhekeza ayenzileyo ivumela ukuba aqonde umxube wombala kunye nemvisiswano akwaziyo ukuyifaka kwimifanekiso yakhe ebalaseleyo kwaye etsala iliso lababukeli.
Njengonikelo kwindalo, nganye yeefoto yenziwe ngamawaka, xelela ibali elinye kunye nezinto ezinxulumene ngandlela thile. I-LeMay ifaka amakhulu emilo kunye nemibala ukwenza iifoto zeparadesi ezinokuthi ngamanye amaxesha zibe bubomi bakho.
Eli gcisa laseCanada untywiliselwa kunxibelelwano kusuka facebook wakho y I-instagram yakhe, kodwa ikwabonelela ngamathuba okusondela kwiifoto zakho ukusuka eyakho iwebhusayithi ukuze kungabikho nto ishiyekileyo kumbhobho.
Ngaphambi kokuba uhambe igcisa esebenzisa indalo ngokwayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukufota » Igcisa lidibanisa amakhulu ezithombe ukwenza irhafu kwindalo
Ngaba kukho umda kuyilo xa kuyilwa ilogo encinci?
Umatshini weDuoGraph owenza imizobo yejometri engapheliyo nguJoe Freedman